Photoshop Online muZimbabwe
Photoshop Online: Basic Zvinhu Zvinowanikwa Pamhepo
Adobe Photoshop ndiyo inotungamira yemahara yekugadzirisa software uye chishandiso chakasimba chekugadzira grafiti. Asi vanhu vazhinji vari kungwarira kushandisa Photoshop online kana kuchinjira kune akabhadharwa mavhezheni echirongwa vachitya kuvharirwa kunze kana kuita kuti account yavo itengeswe kana kumiswa neemail. Ipo Photoshop inowanikwa mune yakazara vhezheni yemahara, pane mashoma maficha epamberi ayo anokubhadhara iwe imwe mari. Saka ndedzipi idzi mari dzekuwedzera?
Zvimwe zvezvinhu zvaunogona kupedzisira wabhadhara semushandisi we Photoshop ndezvi: kukwidziridzwa, yakakosha software, kuraira kana kudzidziswa, uye rutsigiro rwekugadzirisa software. Kana iwe uine Adobe Photoshop account account (yakabhadharwa vhezheni), iwe unogona zvakare kukwanisa kuwana mukana kune kudzidziswa kana dzidziso. Rudzi urwu rwekudzidziswa runogona kukubhadharira mari yemwedzi nemwedzi kuwedzera kune chaiko chigadzirwa mutengo wekutenga we Photoshop. Uye kana wajaira kushandisa software yekugadzirisa pasina kudzidziswa kana rubatsiro rwekudzidzisa, unogona kupedzisira washandisa yakawanda pazvinhu izvi kupfuura zvawaizoita pakurovedza.
Pane imwezve mari inosanganisirwa nekushandiswa kweAdobe Photoshop iyo kazhinji isingaoneswe mumutengo wechirongwa. Nepo iwe uchigona kurodha pasi mahara chirongwa ichi kubva pawebhusaiti yeAdobe, izvi hazvisi izvo graphic vagadziri kana vamwe vanyanzvi vanoshandisa. Izvo zvakakosha kuti urambe uchifunga kuti ichi hachisi chemahara dhizaini software uye haina zvese kugona kweanobhadharwa zvigadzirwa. Izvo zvine, zvakadaro, zvine kugona kutsiva zvinodhura graphic dhizaini software. Vagadziri vemifananidzo vanovimba nematurusi ekugadzirisa mapikicha kuti vawane mibairo yehunyanzvi uye nzira chete yekugadzira mhedzisiro yakadaro ndeye Photoshop.
Photoshop ndiyo nhamba yekutanga pakati pevanyori vekugadzira nekuda kwekushanda kwayo kwepamusoro uye nyore kushandisa. Kunyange iriyo sarudzo yekutanga yekugadzirisa mifananidzo, nyanzvi dzekutora mifananidzo vanoona kugona kwa Photoshop kana zvasvika pakutora mifananidzo nekuvandudza mifananidzo. Vazhinji vateereri vemateur vanoshandisa software yekugadzirisa mifananidzo kuti vagadzirise zvakapusa kumifananidzo. Photoshop's basic maficha - ekugadzirisa maturusi, matete, uye kugadzirisa system - tendera vanhu kuti vaite ekutanga mapikicha ekugadzirisa mabasa nekukurumidza uye nyore. Vanhu vasingazive kushandisa zvishandiso zvekugadzirisa zve Photoshop vanogona kuwana iri basa rakawandisa. Izvi zvinotevera zvinhu zvishanu zvakakosha zvePhotohop izvo munhu anofanira kuziva kana vachishuva kuve anoshanda edhijitari.
Munhu mutsva ku Photoshop Online anofanirwa kuisa nguva inodiwa kuti azvizive nezvakakosha zvinowanikwa online. Zvizhinji zvezvinhu zvekutanga hazviwanikwe mahara pawebhusaiti yeAdobe asi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nekutenga kwechigadzirwa. Munhu anoziva zvinhu izvi anozozviona zvichibatsira kana uchigadzira mifananidzo kana kugadzirira mifananidzo kuti ibudiswe. Zvimwe zvezvinhu zvinonyanya kufarirwa zviripo pamhepo zvinosanganisira: masitayera ekumusoro, mabhureki mabhureki, auto auto, nzira pfupi yekhibhodi, uye kugadzirisa-mukati kugadzirisa.
Imwe yeanoshanda matekiniki ekusimudzira mifananidzo ndeye kugadzirisa kusiana uye mavara. Vanhu vazhinji vanogona kusazviziva asi munhu wepakati anokwanisa kushandisa maturusi ekugadzirisa mapikicha senge hue uye maturu ekugadzirisa ekugadzirisa kuita mutsauko unoshamisa mumifananidzo. Nepo vazhinji vehunyanzvi graphic vagadziri vangangodaro vasina kufunga nezvekuchinja ruvara kana musiyano, zvinogona kuitwa kugadzira mifananidzo inotaridzika zviri nani. Vazhinji vanhu vanokwanisa kuwana nekungogadziridzwa kuri nyore kwezvinhu izvi asi kune avo vane hunyanzvi, zvingave zvakanaka kuti vadzidze maitiro ekuita izvi zvakadzama.
Chimwe chinhu chakakosha chePhotohop iyo isingawanzo kuwanikwa pamhepo ndeye kumashure kwekutarisa. Nechiitiko ichi munhu anogona kuve nechokwadi chekuti vari kuona mufananidzo wakagadziriswa zvakanaka. Izvo zvinokwanisika kuita iyo yekumashure kuti itaridzike zvakasiyana zvachose nekungobaya chete mbeva, asi iyi sarudzo haiwanikwe neese ega ega mapikicha ekugadzirisa chishandiso. Izvo zvakakosha kuti munhu azive zvavari kutsvaga kuti asarudze akanakisa ekugadzirisa mafoto. Izvi zvinonyanya kuitika kune avo vasina kujairana neakakosha maficha ePhotohop.
Zvinyorwa zvinyorwa uye vhidhiyo zvidzidzo ndeimwe nzvimbo iyo vanhu vanogona kuchengetedza yakawanda mari nekutenga Photoshop online. Kana mumwe munhu achizoshandisa mari pachirongwa chitsva, saka vanofanirwa kunge vakagadzirira kudzidza mashandisiro ayo. Mavara ezvidzidzo inzira huru yekudzidza nekuti inobvumidza vashandisi kudzokorora nhanho kuti vawane chaiyo nhanho yekururamisa. Bhokisi rega rega richava nebhokisi rekuyeuchidza izvo zvinoreva kuti mushandisi anofanira kudzokorora nhanho yapfuura kuti agamuchire mhedzisiro yaanoda. Vhidhiyo tutorials inowanikwawo online uye mazhinji mapurogiramu anopa imwechete vhidhiyo dzidziso inowanikwa kurodha pasi. Aya mavhidhiyo ezvidzidzo anotendera vashandisi kuti vaone chaizvo mashandiro akasiyana anoitwa kuitira kuve nechokwadi chekuti vari kuteedzera mafambiro nemazvo.